Byare January 4, 2019
(Europe) 04 Jan 2019. Waxaa dib u furmay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kaa oo tixnaan doona ilaa 31-da bishan.
Xiddiga Qadka dhexe ee Arsenal Aaron Ramsey, 28-jir ayaa heshiis hordhac ah la saxiixday Juventus isagoona bishan ku biiri kara kooxda reer Talyaani. (Sport Mediaset)
Agaasimaha Ciyaaraha ee Sevilla Joaquin Caparros ayaa sheegay in kooxdiisa ay u dhaqaaqi karto xiddiga aan Chelsea looga jeclayn sida buuran weeraryahankii hore ee Real Madrid iyo Juventus Alvaro Morata, 26-jir. (Football.London)
Morata ayaa doorbidaya inuu dib ugu laabto Madrid haddii ayba noqoto inuu ka tago Stamford Bridge laakiin waxaa loo ogolaan doonaa oo kaliya inuu ka tago Chelsea marka ay helaan badelkiisa inta lagu guda jiro suuqan Janaayo. (Sun)
Mustaqbalka Mesut Ozil ee Arsenal lama go’aamin doono ilaa laga gaaro dhammaadka kal ciyaareedkan kaddib markii ay 30-jirka qadka dhexe iyo kooxdiisuba ay hoos u dhigeen suuro galnimada inuu tagayo bishan. (Evening Standard)
Chelsea ayaa go’aan ka soo saari doonta weeraryahankeeda Tammy Abraham 14-ka bishan Janaayo. 21-jirka ayaa amaah ugu jooga Aston Villa laakiin dib ayaa looga yeeri karaa kooxda labo usbuuc gudahood inta lagu jiro Janaayo sababo la xiriiro qadobo qeyb ka ah heshiiska. (Telegraph)
Chelsea ayaa go’aan ka gaartay inaysan Janaayo u dhaqaaqin dhaliyaha reer Argentina ee Gonzalo Higuain, 31-jir kaa oo amaah ku jooga AC Milan isla markaana ka yimid Juventus. (Goal)
Cesc Fabregas looma ogolaan doono inuu dhammeystiro heshiiska uu ugu biirayo Monaco ilaa ay Chelsea la soo wareegto xiddig qad dhexe oo lagu badelo 31-jirka reer Spain. (Calciomercato)
Goolhayaha Real Madrid Keylor Navas, 32-jir, ee usbuucyadii dhawaa lala xiriirinayay Arsenal ayaa cusbooneysiiyay heshiiska uu kula joogo kooxda reer Spain hal sano oo dheeri ah ilaa June 2021. (Marca)
Bayern Munich ayaa dalabkii saddexaad oo dhaafsiisan 30-milyan oo bound ka gudbisay xiddiga qadka dhexe ee weerarka Chelsea Callum Hudson-Odoi, 18-jir . (Sky Sports)
Daafaca Chelsea Gary Cahill, 33-jir ayaa qarka u saaran inuu ogolaado heshiis amaah ah uu ugu dhaqaaqayo kooxda Fulham, kuwaa oo Man United u celiyay daafacooda Timothy Fosu-Mensah si ay boos u sii baneeyaan. (Love Sport Radio)
Crystal Palace ayaa dalab 6.5 milyan ah ka gudbisay weeraryahaka reer Senegal ee Everton Oumar Niasse, 28-jir, kaddib markii uu bur-buray heshiiska amaahda ay ku doonayeen weeraryahanka Liverpool ee Dominic Solanke. (Sun)
PSG ayaa dalab qaali ah oo aysan gaari karin Barcelona ka gudbisay si ay ula soo saxiixato xiddigaha qadka dhexe iyo daafaca dhexe ee Ajax Frenkie de Jong, 21-jir iyo Matthijs de Ligt, 19-jir, (Marca)
Chelsea ayaa qorsheynaysa inay dalab 36-milyan ah ka gudbiso xiddiga reer Mexico ee garabka weerarka kaga ciyaara PSVHirving Lozano, 23. (Calciomercato)
Cardiff and Bournemouth ayaa labaduna doonaya inay la soo saxiixdaan daafaca Liverpool Nathaniel Clyne. The Cherries ayaa doonaysa in 27-jirka ay heshiis amaah ah inta ka harsan xilli ciyaareedkan ku keenaan xeebaha koofureed. (Mail)
Xiddiga qadka dhexe ee Liverpool Adam Lallana, 30-jir ayaa Bishan bartilmaameed u ah kooxda reer Turkish ee Fenerbahce. (Caught Offside)
Tababaraha Tottenham Mauricio Pochettino ayaa diiday inuu meesha ka saaro in xiddiga qadka dhexe ee reer Belgium Mousa Dembele, 31-jir uu bishan ka tagayo the Lilywhites. (Football.London)
Si la mid ah Dembele, Tottenham waxay sidoo kale doonayaan inay diraan Fernando Llorente, 33-jir, Vincent Janssen, 24-jir, Georges-Kevin Nkoudou, 23-jir, iyo Victor Wanyama, 27-jir. (Mirror)
W/D: Tafaftiraha ahna Madaxa Bogga Abdisamed Mohamed Hassan. (Black Yare)
Klopp oo ka warbixiyay sababta ay guuldarada kala kulmeen kooxda Manchester City, kulankii xalay ee Premier League
"Waan wada Ognahay waxa dhici lahaa haddii uu Maxamed Saalax Kor u boodi lahayn...!"-